पसलमा पैसा बुझाउन गएका छोराको रहस्यमय मृत्यु भएपछि ड ‘र र त्रा’सले बाबु आमाले घर नै छाडे ! – Classic Khabar
प्रेम सुनार,गुल्मी : केही दिनअघि गुल्मीको इस्मामा रह’श्यमय रूपमा मृत फेला परेका एक युवकका परिवारजन ड ’र–त्रा’ सका कारण घरबाटै विस्थापित भएका छन् । गत जेठ २६ गते साँझ अन्दाजी ६ बजेको समयमा इस्मा गाउँपालिका-५ पाहकटेरी गाउँका ३० वर्षीय विदुरविक्रम कुँवर घर देखि नजिकै राँगापाईलाको मोटरबाटोदेखि करिव ४५ मिटर तल शिवभिरमा मृत फेला परेका थिए ।
उनको कसैले ह’ त्या गरी उक्त स्थानमा फा’ लेको भन्दै उनका परिवारजनले दो’षीलाई का’र’बा’हीको माग गर्दै आएका छन् । र’ह’स्यमय मृत्युबारे समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि आफूहरूलाई अ’ज्ञा’त व्यक्तिहरूले ध’म्की दिने गरेको र असार २४ गते राति दर्जनौं व्यक्तिहरूले घर घेरेर आ’क्र’म’णको प्रयास गरेपछि आफूहरू घरबाट विस्थापित भइ इस्मारजस्थल ढोकामुखा स्थित एक व्यक्तिको घर भाडामा लिई बस्न थालेको मृ’त’कका बाबु धनबहादुर कुँवरले बताए ।
छोरा कुँवरको घरदेखि ३ सय मिटर पूर्वतर्फ श’व भेटिएको थियो । उनी अघिल्लो दिन दिउँसो दुई बजेको समयमा घरदेखि उता पश्चिमतर्फ खादीपाटीको प्रतिक्षालयमा पुगेका थिए । जहाँ एउटा होटल पनि छ । त्यस प्रतिक्षालयमा उनी केही साथीहरूसंग क्यारम्बोर्ड खेलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्् । उनीसंग त्यस टोलका प्रकाश अर्याल, रामबहादुर विष्ट र सन्तोष विष्टसंग क्यारम्बोर्ड खेलेको स्थानीयले बताएका छन् । त्यस दिन दिउँसो छापास्थित माइती घरबाट आफ्ना तीन वर्षीय छोरा आदर्शलाई लिएर फर्किदै गरेकी बिदुर विक्रमकी श्रीमती शारदा कुँवरले त्यस स्थानमा श्रीमानलाई देखेकी थिईन् ।
त्यसको केही बेरपछि यमबहादुर विष्टको घरको दलानमा बो’का का’टे’का थिए । त्यसको अ’न्द्रा’भुँ डी र गत ल गेर नजिकै रहेको केशव कुँवरको होटलमा पकाएर उनै प्रकाश अर्याल, रामबहादुर विष्ट, सन्तोष विष्ट, राजन कुँवर, धनबहादुर कुँवर, टिकाराम अर्याल, विष्णु घिमिरे, बसन्त विष्ट समेतसंग बसेर विदुर विक्रम कुँवले भु’टु’वा खाएको समेत मृतकका बाबु धनबहादुर कुँवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । राति छोरा घर नआएपछि ती खानपिनमा बसेका साथीहरू मध्येका केशव कुँवरलाई यति अबेर घर आएनन् कता गयो ? भनेर फोन गरेर सोध्धा ८ / ९ बजे नै यहाँबाट घर हिंडेको हो भनेर जवाफ दिएको बताइएको छ ।
मृ’त’क विदुर विक्रमका बाबु धनबहादुर कँुवरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा छोराको र’हश्य’मय मृ’त्यु भएको भन्दै घटनाको छानविन र अनुसन्धानका लागि जाहेरी दिएका छन् । तर प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको सत्यतथ्य सावर्जनिक गर्न सकेको छैन् । यस्ता छन् ह’ त्याको आशंका आशंका –१ : मृ’त’क’को श’वको प्रकृति हेर्दा उनी ल डेर मृ’त्यु भएको भए क’डा च’ट्टा’न भएको त्यस भिरमा उनी खस्दा हात खु’ट्टा भाँ’चि नु पर्ने, मृतकको खुट्टामा एउटा मात्रै चप्पल छ । जुन चप्पल उनी घरबाट हिंड्दा लगाइएको नभई अर्कै भएको परिवारले बताए । उनको नि’दा’रमा चो’ट छ । पछाडि प’ट्टिको शरीरमा कसैले नि’र्घा’त कु’टे जस्तो चो’ टहरू देखिन्छ ।
आशंका नम्बर – २ , प्रहरी नआई शव उठाउनु प-यो भनेर त्यहाँका एक जना नेताले सदरमुकाममा रहेका कुनै एक पहुँचवाला व्यक्तिलाई फोनमा भनेको बताइन्छ । अर्को एक नेतालाई उसै दिन साँझ फोन गर्नुले आफूहरू उसै दिनदेखि थप सं शंकित भएका छौं भन्छन् परिवारजन । आशंका नम्बर – ३ , जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटनाको अनुसन्धन नगर्दै नजिकै रहेको इस्मा प्रहरी चौकीले मृतक ल’डेर मृत्यु भएको भनेर जिल्लामा रिर्पोट पठाएको परिवारले प्रमाण फेला पारेका छन् । सवाल– ४, उनी अघिल्लो दिन साँझ ८ बजे घर फर्केको भए बाटैमा रहेको घर नपसेर घरदेखि उता किन पुगे ?
आशंका नम्बर – ४, उनले भुटुवासंग एउटा क्वा’ट’र मात्रै म’दिरा पिएर हिंडेको त्यस होटलवालाले बताएका छन् । त्यसपछि त्यहाँबाट साँझ ८ बजेतिर घर हिंडेको उनीसंग क्यारम्बोड खेल्ने प्रकाश अर्याललगायतका युवाहरूले बताए । दिउँसो संगै बसेकै कारण आफूहरू माथि परिवारले शं’का गर्ने र प्रहरीले सो’ध–पु’छका लागि बोलाएर दुःख दिने गरेको उनीहरूको पनि गुनासो छ । घटना स्थलदेखि वरै उनको घर छ । उनी त्यही सडक हुँदै पश्चिमतर्फबाट पूर्वतर्फ आउँदा नजिकै घर पर्दछ । उनी उता जानु पर्ने कारण नै देखिन्न । मृतककी श्रीमती शारदाले माइतीबाट आउँदा अघिल्लो दिन श्रीमानलाई त्यही स्थानमा क्यारम्बोड खेल्दै गरेको बताउँछिन् ।
मेरो श्रीमान त्यस दिन साँझ घरको बाटो आई उता जानु पर्ने कारण नै छैन,’– श्रीमती शारदाले भनिन्–‘मेरो श्रीमानको ल’डे र म त्यु भएको हुँदै होइन कसैले ह त्या ग रेर फा ले का हुन् । मृतकका दाजु राजेन्द्र विक्रम कुँवरले पनि भाइको लडेर मृत्यु भएको भनेर पत्याउन नसक्ने बताउँछन् । बाबु धनबहादुर कुँवर छोराको र’हश्य’मय मृ’त्यु प्रकरणले वि क्षि प्त हुँदै आएका छन् । उनले आफूहरूले गु’हा’र नपाएको , त्यसका लागि सञ्चारकर्मी बोलाउँदा ध’म्की सहनु परेकोले २०६० सालमा आफैले बनाएको घर छाडेर अर्कैको घरमा बस्नु परेको दुखेसो गरे ।
Prevमुकुली बिरामी भएर हस्पिटल भर्ना हुँदा भुन्टी पुगेर धरधरी रोईन । आशा खड्का र रिता सिवाकोटी वास्तवमा धेरै मिल्दो रहेछन् (भिडियो हेर्नुस)
Nextश्रीमानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न नसकेको भन्दै श्रीमती पर पुरुष संग सल्किएपछी …..